SOMALIA:Madaxweynaha Soomaaliya oo casho sharaf u sameeyay wafdiga IGAD - Wargane News
Home Somali News SOMALIA:Madaxweynaha Soomaaliya oo casho sharaf u sameeyay wafdiga IGAD
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xaflad balaaran oo casho sharaf ah u sameynaya wafdiga IGAD ee maanta soo gaaray Muqdisho.
Xaflada oo caawa ka socota hotelka SYL oo la dejiyay wafdiga wasiirada ah ee ka socda wadamada IGAD ayaa madaxweynuhu ugu talagalay in lagu soo dhaweeyo wafdiga ka qeybgalaya shirka IGAD ee beri ka furmaya Muqdisho.
Fanaaniinta hobollada qaranka ee Waaberi ayaa caawa halkaasi ku soo bandhigaya heeso iyo suugaan kala duwan oo lagu soo dhaweynayo wafdiga.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Muungaab oo xaflada ka hadlay ayaa madaxda IGAD ku soo dhaweeyay magaalada Muqdisho, isagoo sheegay in Muqdisho ay nabad tahay islamarkaana ay ciidamada qalabka sida iyo kuwa AMISOM ay iska kaashadeen sugidda nabadgelyada Muqdisho.
Sii hayaha Wasiirka arrimaha dibadda C/raxmaan Ducaale Bayle oo halkaasi ka jeediyay hadalo soo dhaweyn ah, kadib ayaa sheegay in shirka wasiirrada arrimaha dibadda ee wadamada IGAD uu berri ka furmi doono hotelka SYL ee magaalada Muqdisho
Xafladan casho sharafka ah ee madaxweynuhu u qabtay wafdiga ka qeybgalaya shirka IGAD ee beri ka furmaya Muqdisho ayaa qeyb ka ah hab maamuuska lagu soo dhaweynayo madaxda IGAD ee caawa ku hoyanaysa Muqdisho.